Joshụa 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Mgbidi Jeriko dara (1-21)
E gbughị Rehab na ndị ezinụlọ ha (22-27)
6 E mechisiri ọnụ ụzọ ámá Jeriko ike n’ihi ndị Izrel. O nweghị onye na-apụ apụ. O nweghịkwa onye na-abata abata.+ 2 Jehova wee sị Joshụa: “Enyefeela m ma Jeriko ma eze ya ma ndị agha ya dị ike n’aka gị.+ 3 Ụmụ nwoke niile ndị na-aga agha ga-aga obodo ahụ gburugburu otu ugboro. Ha ga-eme ya otú ahụ ụbọchị isii. 4 Ndị nchụàjà asaa ga-eji opi asaa e ji mpi ebule mee, na-aga n’ihu Igbe Chineke. Ma, n’ụbọchị nke asaa, unu ga-aga obodo ahụ gburugburu ugboro asaa. Ndị nchụàjà ahụ ga-afụkwa opi ndị ahụ.+ 5 Ha fụọ opi ndị ahụ, ndị agha niile ga-eji oké olu tie mkpu agha ozugbo ha nụrụ ụda opi ndị ahụ. Mgbidi obodo ahụ ga-adakwa, daruo ala.+ Ndị agha ahụ ga-agbagokwa, onye nke ọ bụla n’ime ha ga-aga ebe o chere ihu.” 6 Joshụa nwa Nọn wee kpọkọta ndị nchụàjà, sị ha: “Burunụ igbe ọgbụgba ndụ. Ndị nchụàjà asaa ga-ejikwa opi asaa e ji mpi ebule mee na-aga n’ihu Igbe Jehova.”+ 7 Ọ gwakwara ndị agha, sị: “Gawanụ, gaakwanụ obodo ahụ gburugburu. Ndị agha, ndị jikeere agha,+ ga na-agakwa n’ihu Igbe Jehova.” 8 Ha niile mere ihe Joshụa gwara ha. Ndị nchụàjà asaa ndị ji opi asaa ndị ahụ, ndị nọkwa na-aga n’ihu Jehova, gafere fụọ opi ndị ahụ. E bukwa igbe ọgbụgba ndụ Jehova na-eso ha n’azụ. 9 Ndị agha ahụ, ndị jikeere agha, nọ na-aga n’ihu ndị nchụàjà ahụ ndị na-afụ opi. Ndị nke nọ n’azụ azụ sokwa Igbe ahụ n’azụ ka a na-afụ opi ndị ahụ. 10 Joshụa gwakwara ndị Izrel, sị: “Unu etila mkpu. Unu emekwala ka a nụ olu unu. Unu ekwukwala okwu ọ bụla ruo mgbe m ga-asị unu, ‘Tienụ mkpu!’ Unu ga-etizi mkpu.” 11 Joshụa hụkwara na e buuru igbe Jehova gaa obodo ahụ gburugburu. E bu ya gaa ya gburugburu otu ugboro. E mechaa, ha alaghachi ebe ha mara ụlọikwuu rahụ ebe ahụ. 12 N’echi ya, Joshụa biliri n’isi ụtụtụ, ndị nchụàjà eburu Igbe+ Jehova, 13 ndị nchụàjà asaa, ndị ji opi asaa ahụ, ana-agakwa n’ihu Igbe Jehova, na-afụ opi ndị ahụ. Ndị agha ndị jikeere agha nọkwa na-aga n’ihu ha. Ma, ndị nke nọ n’azụ azụ so Igbe Jehova n’azụ ka a na-afụ opi ndị ahụ. 14 Ha gara obodo ahụ gburugburu otu ugboro n’ụbọchị nke abụọ, laghachikwa ebe ha mara ụlọikwuu. Ha mere ihe a ụbọchị isii.+ 15 N’ụbọchị nke asaa, ha biliri n’isi ụtụtụ ozugbo chi bọrọ, gaa obodo ahụ gburugburu otú ha na-eme. Ha gara nke ugbu a ugboro asaa. Naanị n’ụbọchị ahụ ka ha gara obodo ahụ gburugburu ugboro asaa.+ 16 Mgbe ha gara nke ugboro asaa, ndị nchụàjà fụrụ opi, Joshụa asị ndị agha ahụ: “Tienụ mkpu,+ n’ihi na Jehova enyela unu obodo a. 17 A ga-ebibi obodo a na ihe niile dị n’ime ya.+ Ha niile bụ nke Jehova. Naanị Rehab+ nwaanyị akwụna ahụ ga-adị ndụ, ya na ndị niile ya na ha nọ n’ụlọ, n’ihi na o zoro ndị anyị dunyere ozi.+ 18 Ma unu emetụkwala ihe a ga-ebibi ebibi aka.+ Ka ọ gharakwa ịgụ unu agụụ, unu ewere ya,+ ya abụrụ ihe a ga-eji maka ya bibie ndị Izrel, ya akpatakwara ha ọdachi.*+ 19 Ma, ọlaọcha na ọlaedo niile na ihe ndị e ji ọla kọpa na ígwè mee dị nsọ, bụrụkwa nke Jehova.+ A ga-ebuba ha n’ebe a na-edowe akụ̀ n’ụlọ Jehova.”+ 20 Mgbe a fụrụ opi, ndị agha tiri mkpu.+ Ozugbo ha nụrụ ụda opi ahụ ma tie ezigbo mkpu agha, mgbidi obodo ahụ dara, daruo ala.+ Onye ọ bụla n’ime ha esi ebe o chere ihu banye n’obodo ahụ. Ha wee weghara obodo ahụ. 21 Ha ji mma agha gbuo ihe niile nọ n’obodo ahụ, ma nwoke ma nwaanyị, ma nwata ma okenye, ma ehi ma atụrụ ma jakị.+ 22 Joshụa gwaziri ụmụ nwoke abụọ ahụ gara nyopụta otú ala ahụ dị, sị: “Banyenụ n’ụlọ nwaanyị akwụna ahụ, kpọpụtanụ ya na ndị nke ya niile, otú ahụ unu ṅụụrụ ya n’iyi.”+ 23 Ndị ahụ gara nyopụta otú ala ahụ dị banyere n’ụlọ ahụ, kpọpụta Rehab, nne ya na nna ya, ụmụnne ya ndị nwoke, na ndị nke ya niile. Ha kpọpụtara ndị ikwu ya niile+ n’enweghị ihe mere ha, kpọga ha n’ebe dị iche n’ebe ndị Izrel mara ụlọikwuu. 24 Ha gbaziri obodo ahụ na ihe niile dị na ya ọkụ. Ma, ha dowere ọlaọcha, ọlaedo, na ihe ndị e ji ọla kọpa na ígwè mee n’ebe a na-edowe akụ̀ n’ụlọ Jehova.+ 25 Naanị Rehab nwaanyị akwụna na ezinụlọ nna ya na ndị nke ya niile ka Joshụa hapụrụ ndụ.+ O bikwa n’Izrel ruo taa,+ n’ihi na o zoro ndị ozi Joshụa zipụrụ ka ha nyopụta otú Jeriko dị.+ 26 Joshụa bụrụ obodo a ọnụ* n’oge ahụ, sị: “Ka Jehova bụọ onye ọ bụla ga-achọ ịrụghachi obodo Jeriko a ọnụ. Ka ịtọ ntọala ya taa isi ọkpara ya. Ka itinye ibo ụzọ ya taakwa isi ọdụdụ nwa ya.”+ 27 Jehova wee nọnyere Joshụa,+ ya ana-ede ude n’ụwa niile.+
^ Ma ọ bụ “nsogbu.”
^ O nwere ike ịbụ, “Joshụa mere ka ndị Izrel bụọ obodo a ọnụ.”